Best Hotels in Tokyo - Ginza, Shinjuku, Shibuya, Marunouchi, Asakusa
Asia Japani Tokyo
Kwokugara Muzvikoro Zvose zveTokyo
Kubva kumasvingo anoshongedzwa mukati meTokyo mavara-ekare-uye mahara-mahara kuenda kumakamuri echiJapan-style yokugara munzvimbo dzakanyarara dzekugara, muJapan musha unopa nzvimbo dzekugara kuti uwane kutarisa kwevaya vanofambira. Zvichida nzira yakanakisisa yekuona guta iri kuparadzanisa nguva yako pakati pekutsika uye tsika; Kurara pamusoro pemigwagwa yakawanda yeShinjuku apo iwe uchitarisisa guta racho, uye wobva wadzokera kune ryokan kuti uzorore uye uzorore. Chero chero chimiro chaunosarudza, mahofisi aya anotevera ndiwo anonyanya kukosha mune imwe nzvimbo yeTokyo yakakura.
Inotora kufamba kwemaminitsi gumi nemashanu kubva ku-frenetic centre yeShinjuku, Hilton Tokyo inopa chikamu cherugare pakati peimwe nzvimbo inonyanya kugadzikana yeguta. Imakamuri anopfuura 800 nemasiteti paHilton ane minimalist, mazuva ano-maJapan-akafuridzirwa maziso, kusanganisira zvinhu zvetsika zvakadai sechiedza chinoratidzira shoji screens uye, zvechokwadi, nyika inodiwa high-tech TOTO vagadziri. Ihotera yehotera yeehotera yemakore makumi maviri nemana inotora nzvimbo dzekunze dzepamusoro tennis tennis, dzimba remukati, fitness centre uye chikepe cheJapan. Muna 2014, kusarudzwa kwaHilton kudya kwakagadziridzwa kwakagadziriswa kubva kunzvimbo yekuvakwa kwekambani NAO Taniyama & Associates. Tsunohazu - chikwata chekuzara-dining uye chikwata-chinopa chiJapane, chiChinese uye chikafu chekudya pakati pezvizvarwa zveJapan mapuranga uye washi mapepa emagetsi.
Shibuya Hotel En inopa makamuri anenge makumi maviri nemazana masere mukati memutambo wemaminiti gumi kubva kuShibuya Station (uye Shibuya Crossing inonzi yakakurumbira, iyo migwagwa mitanhatu inoshumira imwe nzira yakakura, uye vatashanyi vanomirira boka rinoshandiswa selfies). Ihotera yacho yakagadziriswa munaFebruary 2016 kuratidza mutambo we "tsika dzekuJapan uye zvekuMadokero kushanda" mune imwe nzvimbo yeguta rakanyanya kuderera uye rakatambudzwa. Mahwendefa maduku asi akajeka uye ane maumbirwo emapuranga ematanda, mabwe nekrete matombo. Zvitatu zvitatu zvakakura zvivako zvinosanganisira zvidzidzo zvadzo paimba yepfumbamwe. Zvose zvigaro zvinoshambadza dzimba dzekushambidza negirazi dzemvura dzinoshambidza uye dzimba dzinopisa.
Tokyo Station / Otemachi: HOSHINOYA Tokyo
Hoshinoya itsva yeTokyo inotora nzvimbo yose yemusara we-17-pasi muOtemachi, maminitsi mashomanana kubva kuTokyo Station uye yakazara zvakakwana mumatanical latticework. Hoshinoya vashanyira vanokurumidza kuvhara shangu dzavo (pamwe nezvose zveTokyo zvinotyisa simba) pakuongorora-hotera yekasike -style hove inzvimbo yekunyunyutira mukati meguta reTokyo mumaguta. Ndiyo chete yehotera yepamusoro inoshongedza mvura yepasi pevhu yeAtemachi Hot Spring ichangobva kuwanikwa - mvura inoputirwa kusvika muimba yepamusoro yevasvingo apo vaenzi vanogona kushambidza mumhepo yekushambidzira pamashamba pasi peredzi. Makamuri paimba imwe neimwe yepakati nepasi pemuganhu we Ochanoma Lounge, apo vaparidzi vanogona kunakidzwa nekunakidzwa nekukwirira kwepamusoro ramen panguva yemanheru, uye onigiri rice mipira inouya mangwanani.
Nzvimbo ndiro zita remutambo paSolaria Nishitetsu, iyo inowanikwa pakati pemigwagwa inofara yekutengesa yeGinza, maminitsi mashoma kubva kuGinza Station. Ihotera yacho inopa dzimba dzemazuva ano nemitsara yakachena - imwe neimwe yega yakakwana, kana yakawanda, ichizorora kubva mumigwagwa yeTokyo yakanyanyisa. Chikudya chavhenekeri chinowanikwa kuNishitetsu asi kwete chakabatanidzwa muimba yepamusoro, naizvozvo fungai zuva rega rehotera pedyo neTsika yeTsukiji, uko kudya zvokudya zvepanyika zvakasvibirira zvekudya zvekudya (nenzira ye sushi, skewers, kana donhu ndiro) ndiyo inowanzo.
Roppongi: Grand Hyatt Tokyo
Mune rimwe dunhu reTokyo rakanyanya kufara usiku, hapana husiku huri nani huri nani pane hukuru Hyatt Tokyo. Asi usangodzokera kumakamuri 387 emakamuri uye suites kana yava nguva yekupinda. Iva nechokwadi chekugadzirisa imwe nguva mufambiro yako kuti uwane zvakanyanya Hyatt yakatsvuka granite uye hardwood phukuva rekugezera, uye spa nepunge dzimba uye sauna. Ihotera ine zvivako gumi nemapuranga, kusanganisira chido chechiJapan chekuchengetedza maovheni ane oki. Makamuri paHyatt akachengetwa nemahogany furniture, Frette mabheji anoshamwaridzana uye mabhedha emvura.
Claska iTokyo-hipster-kitsch pane zvakanakisisa, uye inonyanya kukosha kune nzvimbo yekugara yeMeguro yega pachayo. I-Insta-hoteli yakagadzirwa inoshandisa machina mana emakamuri, kubva kumabvazuva-inosangana kumadokero "tatami" makamuri nemakamuri esimbi uye yendarama rattan flooring, ku "DIY" makamuri ane zvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko nevagadziri nevanogadzira. Ihotera iri chikamu cheshamwari huru yeClasska iyo inosanganisira studio, gallery, design boutique, French restaurant uye padenga reimba, kubva paMat. Fuji inoonekwa mumazuva akajeka. Muchidimbu chechikapu chechiputi, Claska inopa bhizimisi yekupa bhasikoro inopiwa neTokyoBike, uye iri kumba kune yakakurumbira imbwa yekugadzira saloni - DogMan.
Mumoyo weTokyo unofadza nzvimbo yeAsakusa - nhasi kunzvimbo yevashanyi vanotarisa kuti vaone Tokyo kune makumi emakore apfuura - Ryokan Kamagawa inopa ruzivo rwekugara kwevanhu vanomiririra mamiriyoni emhuri dzeJapan dziripo zororo nhasi. Makamuri (kwe1-5 vagari) anongorongedzerwa nematami matsvuku nematafura emapuranga panguva yemasikati, uye futon mattresses anoiswa kunze zvakananga pasi achiuya manheru. Kamagawa inopa bhodhoro duku redu (rinowanikwa kushandiswa pachedu) uye zvose zveJapan neWestern breakfasts. Ryokankan's service service uye nzvimbo yakanakisisa yeAakusa's main attraction - temu yekare yeBuddhist Sensoji uye yevoruzhinji yekuyeuka mabhigwa mumugwagwa - inoita nzvimbo yakakwana yekugara muJapan.
Ueno / Taito: Edo Sakura
Pedyo imwe yenzvimbo dzeTokyo dzinonyanya kuratidza ruzivo cherry, Ueno Park, Edo Sakura wezvigadzirwa zvekugadzirira anopa tendami yemitambo uye makamuri ekuMadokero mumugwagwa wakanyarara uri munzvimbo yaigara Taito. Ihotera inoita tsika dzetsika yekasi nguva dzose, uye inopa mabhuku akavanzika nokuda kwekushambadzira kwayo kweJapan kwakanyarara. Chikudya chamangwanani chinoshandiswa nechitarisiko chemahombekombe eguva remuzinda webindu rebwe.
Nzira 3 Dzokubva Narita Airport kusvika kuTokyo
Nzira Yokudya Sushi
7 Paruwasi dzekuTokyo dzeTokyo Uchanoda
Zvinhu Zvakaipisisa Zvokuita muTokyo
Top 3 Dinner Views yeTokyo
Basic Dutch Phrases Kuti Ushandise muAmsterdam
Kushanyira Imba yaPonce deLeón kuLa Casa Blanca
10 Small Florida Towns With Great Festivals
Mutungamiri kuRarelas Neighborhood muAlbuquerque
Long Bridge Park 4th of July Mutambo 2017: Arlington VA
Zvikuru zveBrazil munaJuly
Rainiest Cities World
Zvose Pamusoro peLondon Taxis
Famous Famous Actors & Actresses